कसैको लाइफ टाइम एचीभमेन्ट हुन सक्ला तर जनताको भलोको चान्स छैन – नेता लाल – Sanghiya Online
Posted on : March 13, 2021 - No Comment
बृखेश चन्द्र लाल
नेपाली काँग्रेसका सभापतिले अब कम्यूनिस्टहरूसंग लड्ने बेला आएको भन्नु भएको छ । बेलाको अनुभूतिमा अबेला भए पनि भित्रदेखि भन्नुभएको हो भने यो अभिव्यक्ति स्वागत योग्य छ । तर, नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सकेन तथा समावेशी स्वरुप र पहिचानको सम्मान दिन सकेन भन्ने तथ्यको पनि हेक्का राखिनु नै पर्दछ । यस्तो सत्यलाई नियाल्दा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एक मात्र पार्टी नेपाली काँग्रेस नै हो र अरू सबै अलोकतान्त्रिक हुन् भन्नु पटक्कै मिलेन जस्तो लाग्छ ।
लोकतन्त्रको मजबूत प्रतिष्ठापनको निमित्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकताको पर्याय हुने गरी सहकार्य जरुरी छ । यस आवश्यक अभियानको लागि वांछित प्राथमिकताहरुको निर्क्यौल आवश्यक छ । वहाँलाई सत्ता समीकरणभन्दा यसबारे छलफल प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्दछु ।
लोकतन्त्रको मर्म अनुसार संविधान विपरितको कार्य निरस्त भइसकेपछि अब जनवैधता प्राप्त सरकार आवश्यक छ । र त्यसैले तुरन्त निर्वाचन जरुरी छ । निर्वाचनमा लोकतन्त्रको मजबूतीको निमित्त वांछित प्राथमिकताप्रति प्रतिवद्धता सहित जनादेशको याचना अर्को कदम हुनेछ ।
सत्ता समीकरण देशको अहिलेको प्राथमिकता वा पहिचान र सम्मानको निमित्त संघर्षशीलहरुको एजेन्डा होइन । यसले कसैको स्वार्थको आपूर्ति वा कसैको लाइफ टाइम एचीभमेन्ट हुन सक्ला तर जनताको भलोको चान्स छैन ।
लोकतन्त्र र जनताको एजेन्डाप्रति प्रतिवद्धता छ भने पहिले जनवैधता प्राप्त सरकारको निमित्त निर्वाचनतिर लागौं । सरकार गठनको खेललाई नकारौं ।
स्थानियले भन्छन सिमा मिचेको छैन, नेताहरुले भन्छन मिचेकै हो, यस्तो छ राजनीति खेल !
भारतको इशारामा जोगियो उपेन्द्रको मन्त्रि पद कि प्रचण्डको आग्रहमा ? किन गरेन पद मुक्त ?